Efa tsy gaga amin’ny fampitahorana ady amin’i Shina lazain’ny filoha teo aloha ny ankamaroan’ny Taiwaney · Global Voices teny Malagasy
Efa tsy gaga amin'ny fampitahorana ady amin'i Shina lazain'ny filoha teo aloha ny ankamaroan'ny Taiwaney
Mety ho teny fanohanam-piraisana kosa ny fijerin'i Shina Tanibe izany
Voadika ny 01 Septambra 2020 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Español, English
Filoha Taiwaney teo aloha Ma Ying-jeou milaza fa manosika an'i Taiwan ho eo ambavahaonan'ny ady ny fitondrana amin'izao fotoana. Pikantsary avy amin'ny United Daily News / Youtube.
Ao anatin'ny fanaovan'i Shina sarinady ara-miaramila ao amin'ny andilan-dranomasin'i Taiwan amin'izao fotoana izao, nahazo dera tao an-tanibe ny kabarin'ny filoha Taiwaney teo aloha Ma Ying-jeou nitsikera ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoana amin'ny fivandrinana amin'i Repoblika Entim-Bahoaka an'i Shina — saingy tsy toy izany kosa tao Taiwan.
Niteny nandritra ny kaoferancsa iray tao Taipei tamin'ny 10 aogositra, nanambara ny fahafaha-manao ara-miaramila an'i Taiwan ho tsy mifanentana amin'ny an'i Shina i Ma, izay mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra Kuomingtang (KMT), ary nanontany ny fanolorantenan'i Etazonia hanavotra raha misy ny fananiham-bohitra feno. Araka ny nolazainy, vantany vao manao bemidina ara-miaramila amin'i Taiwan i Shina, dia “ny fifanandrinana voalohany no ho farany.”
Nakotrokotroka tao amin'ireo mpaneho hevitra sy ny media sosialy tao amin'ny Tanibe ny teny fanaratsian'i Ma, ka ny Foiben'ny Fahitalavitra ao Shina (CCTV) izay tohanan'ny fanjakana no mandray sy mitondra ny fomba fijeriny.
Mandritra izany fotoana izany, fitsapan-kevitra an-telefaonina notarihan'ny Orina Mpanasoa Hevi-Bahoaka Taiwan tamin'ny 17 sy 18 aogositra no nahitana fa 58 isanjato tamin'ny namaly no tsy mankasitraka ny fomba fijerin'i Ma ary “tsy matahotra fivakisan'ny ady eo amin'i Shina sy Taiwan.”
Hatramin'ny fanombohan'ny volana Aogositra, nampakatra avo ny sarinady ara-miaramilany miaina ao amin'ny ranomasina atsimo sy andrefany i Shina, amin'ny ampahany ho setrin'ny fitsidihan'ny sekretera misahana ny fahasalamana ao Etazonia Alex Azar tao Taiwan.
Azar no manampahefana ambony indrindra nitsidika ny nosy tao anatin'ny taompolo maro, ary nomelohin'i Beijing ny fahatongavany tany.
Nilaza ny Taiwaney mpisera Twitter Otto Huang fa nandritra ny kabariny, namarana izany manome “teny fanevan'ny propagandy” ho an'i Shina i Ma:
馬英九 提供給 央視 武統台灣的「口號」https://t.co/uiPPT4UhNP pic.twitter.com/CB4XUfbsXq
— Otto Huang (@OttoHuang120) August 19, 2020
Nomen'i Ma Ying-jeou ny CCTV hanana teny faneva propagandy amin'ny fampitambarana an'i Taiwan amin-kery.
Nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny foiben'i KMT ny vondrona mpanohana ny fahaleovantena Taiwaney tamin'ny 13 aogositra, mitaky ny anesorana ny maha-mpikambana an'i Ma:
We cannot accept Ma’s talk of capitulation — and that coming from a former president, who is now a propagandist for China and coerces the Taiwanese to surrender to China without a fight.
Tsy afa-manaiky ny kabarim-pibabohan'i Ma izahay — ary avy amin'ny filoha teo aloha izany, izay lasa propagandista ho an'i Shina ary manery ny Taiwaney hitolo-batana amin'i Shina tsy misy ady.
Saingy niala indroa misesy ny fijeriny i Ma avy eo. Tamin'ny 22 Aogositra, nandritra ny kaoferansa iray hafa, nanao kabary fanindroany izy, ary mbola niampanga an'i Tsai ho mitsipaka ny marimaritra iraisan'ny taona 1992 sady nitsikera ny fanamafisana ny fifandraisan'ny nosy amin'i Etazonia. Nampiany :
If Beijing were to use force against Taiwan as a way to push Washington to make concessions, Taiwan would turn from a chess piece to an “abandoned son” and ultimately a sacrifice.
Raha voatery hampiasa hery amin'i Taiwan i Beijing hanosika an'i Washington hanao fileferana, dia ho vatom-panorom-bazaha lasa “zanaka nilaozana” i Taiwan ary ho lasa sorona any amin'ny farany.
Nanome vahana indray ny fampanjakazakana ny kabarin'i Ma ireo sehatra an'ny fanjakana sy misampana amin'ny antoko ao amin'i Tanibe.
Fanjakana nanjaka tena ho azy i Taiwan hatramin'ny taona 1949, rehefa resy tamin'ny ady an-trano shinoa ny KMT, ny antoko nitondra tao amin'i Repoblikan'i Shina (ROC), ary nametraka ny tenany tao amin'ny nosy.
Tamin'ny taona 1992, tamin'ny fotoana nampafana ny fifandraisana, nihaona i Taipei sy i Beijing ary nanambara fa nifanaiky ny firenena roa tonta fa mandrafitra an'i “Shina tokana,” amin'izay lasa fantatra amin'ny hoe marimaritra iraisan'ny taona 1992, ry zareo. Nanjary niteraka fifandirana hatramin'io fotoana io ny tena dikan'io marimaritra iraisana io.
Tafavoaka ny fahefana ny KMT tamin'ny taona 2016, ka nivoaka ho mpandresy tamin'ny elanelam-bato betsaka i Tsai Ing-wen avy ao amin'ny Antoko Liampandrosoana Demaokratika, mpisolovava mahazatra ny fahaleovantena Taiwaney.
Tamin'ny Janoary 2019, nanambara ny Filoha Shinoa Xi Jinping fa ny fomba nandraisan'i Shina ny “Marimaritra iraisana taona 1992″ no nahatonga ny “Firenena Iray, Rafitra Roa,” fotokevitra izay nampiharina amin'ny fitantanam-panjakana ao Hong Kong sy Macau. Nitsipaka avy hatrany io fomba fandraisana azy io i Tsai. Tamin'ny Janoary 2020, voafidy ho filohan'i Taiwan indray izy tamin'ny vato mihoatra ny 57 isanjato.
Na dia misy aza ny propagandy fanelezana ny fomba fijerin'ny kabarin'i Ma, dia misy ireo olom-pirenen'i Tanibe vitsy maneho ny fiahiahiany amin'ny fahatsoram-pony. Ohatra, valiny iray malaza ao amin'ny tohivakan'i Global Times ao amin'ny Weibo no niteny:
Nandritra ny 8 taona i Ma no teo amin'ny fahefana nefa tsy nanamafy ny fampiraisana fa ankehitriny izy mbola sahy miteny tahaka izany. Tsy misy hafa amin'i Tsai izy. Mbola tsy nahita olona tsy mahalala menatra tahaka izao aho.
Ao amin'ny randra-dahatsoratra iray hafa ao amin'ny matoandahatsoratr'i Xia Ke Dao ao amin'ny Isanandrom-bahoaka, milaza toy izay ny mpaneho hevitra iray:
Miresaka amin'ny tsy fanovana na inona na inona i Ma – tsy fahaleovantena, tsy fampiraisana, tsy bemidina miaramila, fa resaka fihazonan-tongotra. Mihavitsy hatrany izao ny olona manohy lalana mankany amin'ny fampiraisana.
Mandritra izany fotoana izany, mivantambatana kokoa ny fiontana ao Taiwan. Manameloka ny kabarin'i Ma ny mpitondratenin'ny Biraon'ny Filohampirenena Taiwan, Alex Huang:
In the face of China’s oppression, the nation should not relinquish its sovereignty, democracy or freedom, but rise up against an autocracy by uniting its people in soliciting international support.
Manoloana ny famoretan'i Shina, tsy tokony hamoy ny fiandrianam-pireneny, ny demaokrasiany na ny fahafahany ny firenena, fa hitsangana hanohitra ny fanjakana tsirefesi-mandidy amin'ny fampiraisana ny vahoakany amin'ny fangatahana fanohanana iraisampirenena.
Ary YC Jou, Taiwaney iray malaza amin'ny tsikera ara-kolontsaina, mandresy lahatra ao amin'ny lahatsoratra Facebook misy mizara imbetsaka fa tsy mety mahatakatra ny fihetseham-pon'i Taiwan amin'izao fotoana momba ny resaka fanakambanana ry Ma sy ny mpikabary hafa tao amin'ny kaoferansa:
Ny fahadisoan-dry zareo lehibe faharoa dia tsy takatry ry zareo ny fahatapahan-kevitry ny vahoaka Taiwaney. Eta an-taonany maro ry zareo no nandrahona ny vahoaka Taiwaney ary tsy fantatry ry zareo fa efa leo izany izahay.
Koa satria efa fantatry ny vahoaka Taiwaney izay mitranga any Hong Kong, dia fantatray fa raha tsy mifahatra izahay izao, dia tsy hanana hirika ho anay hifaharana. Mihoatra noho izay ataon-dry zareo an-tsaina ny fifohazan'ny vahoaka Taiwaney.